11 Barnaamijyada Kalluumeysiga Bilaashka ah ee ugu Fiican oo leh Talooyin Xoog leh 2022
Bogga ugu weyn Barnaamijyada Kalluumeysiga Bilaashka ah ee ugu Fiican oo leh Talooyin Xoog leh 2022
Barnaamijyada Kalluumeysiga Bilaashka ah ee ugu Fiican oo leh Talooyin Xoog leh 2022
Waayo -aragnimadaada kalluumeysi ee ugu horreysa ayaa laga yaabaa inaysan si xun u dhammaan, laakiin waxaad u baahan doontaa wax ka fiican jimicsigaaga xiga.
App-ka kalluumeysiga, kaliya ma awoodo inaad kalluumeysato, waa inaad awood u yeelatid inaad ilaaliso tirakoobka hawlahaaga kalluumeysi sida kuwa aad qabato, meelaha aad ugu jeceshahay kalluumeysiga, waxyaabaha ugu fiican, iyo wixii la mid ah.
Adiga oo aan dheereyn, sii akhri si aad u aragto 11 barnaamijyada kalluumeysiga bilaashka ah ee ugu fiican ka hor inta aadan xariiqin xariiqdaada.
Barnaamijyada Kalluumeysiga Bilaashka ah ee ugu Fiican
Waa kuwan liiska 10-ka barnaamij ee kalluumaysiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan oo leh tilmaamo iyo astaamo awood leh oo ka dhigi kara khibradaada kalluumaysi mid qiimo leh:
Knot Fishing Lite
Sonar Xeel Dheer
Anglr waa mid ka mid ah barnaamijyada kalluumeysiga ee bilaashka ah ee mudan in la soo dejiyo. App-kan, si fudud ayaad akoon uga samaysan kartaa oo aad la geli kartaa macluumaadkaaga kalluumaysiga. Si kastaba ha ahaatee, app this waxaa loogu talagalay hab in ku dhawaad ​​wax kasta oo waxa ku jira ay yihiin kuwo aad si toos ah.
Markaad kalluumaysiga bilowdo, waddadaada GPS, xaaladda cimilada oo ay ku jiraan macluumaadka heerkulka hawada ee goobtaadu waa la qabsan doonaa. Barnaamijkan wuxuu leeyahay nooc bilaash ah iyo nooc casriyeyn lacag bixin ah.
FishAngler waa barnaamij kale oo kalluumeysi oo bilaash ah oo ugu fiican oo mudan in la soo dejiyo. Barnaamijka FishAngler wuxuu leeyahay afar hawlood oo aasaasi ah: badhamada, saadaasha cimilada oo leh saadaasha badda ee toddobada maalmood ah, astaamaha buugaagta.
Waxa kale oo ay leedahay in ka badan 50 astaamood oo qabasho sax ah oo aad isticmaali karto si aad ula socoto qabashada iyo xaaladaha, oo ay ku jiraan bulsho dalwad ah oo aad kula falgali karto kalluumaysatada adduunka oo dhan.
#3. Qoto dheer Sonar Smart
Deeper Smart Sonar waa mid ka mid ah barnaamijyada kalluumeysiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay in lagu isticmaalo isku darka Deeper ee caanka ah kalluunka la shubi karo.
Waxay muujineysaa xogta waqtiga-dhabta ah ee dareemayaasha, taasoo kuu oggolaaneysa inaad aragto macluumaad waxtar leh sida qoto-dheeraanta biyaha, heerkulka, dhulka hoose, booska kalluunka, iyo wixii la mid ah.
Waxaa loo qaabayn karaa siyaabo kala duwan, oo ay ka mid tahay kartida samaynta kalluunka kala duwan iyo digniinta qotada dheer, hagaajinta muuqaalka bandhigga, oo u kala dhex mara kalluunka curdinka ah iyo kuwa qaangaarka ah.
Moreso, Waxay bixisaa xog kala duwan, sida saadaasha cimilada, jadwalka dayax -gacmeedka, muuqaalka kaamerada, iyo khariidado badan oo la soo dejisan karo, kuwaas oo ku habboon kuwa ka kalluumeysanaya meelaha leh soo dhaweynta taleefanka oo liidata.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa si aad u calaamadiso jagooyinka muhiimka ah oo aad ula socoto qabsashadii hore. Waxa kale oo aad la wadaagi kartaa qabashadaada adduunka intiisa kale adoo adeegsanaya baraha bulshada. Deeper Smart Sonar dib u dhac weyn ayaa ah inaan loo adeegsan karin kabka.
Fishbrain waa barnaamij kale oo kalluumeysi oo bilaash ah oo mudan in la raadiyo. Waa mid ka mid ah app-ka ugu dadka badan, oo leh shabakada ugu weyn ee bulshada (Twitter, Tumblr, Facebook) ee kalluumaysatada iyo sagaal milyan oo isticmaale oo ka baxsan biyaha.
Waxa xiisaha lihi leh, Fishbrain waxa ay leedahay sifo gaar ah oo u oggolaanaysa isticmaalyaasheeda in ay soo geliyaan qabashada, warbixinnada kalluumaysiga, iyo indho-indheynta. App-ka Fishbrain-ka, waxa kale oo aad ku arki kartaa meelaha kale ee kalluumaysatada kaluumaysatada, taas oo keenaysa is dhexgalka iyo xidhiidhka kaluumaysatada.
Waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee ku saabsan barnaamijkan ayaa ah inaad saadaalin karto howlahaaga kalluumeysi sidoo kale waxaad heli kartaa casriyeynta cimilada. Caqabadda ugu weyn ee barnaamijkan ayaa ah inaysan lahayn habayn juqraafi.
Fishidy waxay bixisaa khariidado ka badan 20,000 oo biyo macaan ah iyo 180 marin biyood oo cusbo ah, iyo sidoo kale xog ku saabsan 175,000 durdurrada Mareykanka oo dhan.
Kanaal kasta waxaa lagu calaamadeeyay dhibco kalluumeysi, dhaqdhaqaaq kalluun xilliyeed, iyo qaabab kalluumeysi. Warbixinnada dhaqdhaqaaqa xaglaha-waqtiga-dhabta ah waxay hubin doonaan inaadan weligaa qaniinin qaniinyada.
Waxa kale oo aad u adeegsan kartaa app -ka buugga diiwaangelinta, duubista iyo la -qabashadaada la -wadaagyaasha kale. Markaad tan samayso, doorsoomayaasha cimilada si toos ah ayaa loo diiwaangelin doonaa.
Marka laga soo tago sawirada khariidad fudud iyo xariiqyo qotodheer, daabacaadda qaddarka Fishidy waxaa ka mid ah isku-duwayaasha GPS-ka iyo dahaadhyo badan oo ikhtiyaari ah oo muujinaya tafaasiisha ku saabsan dhismayaasha biyaha hoostooda, daaqinka, tamashlaha doonta, iyo qaab dhismeedka saldhigga.
Dhibaatada kaliya ee ku saabsan codsigan ayaa ah inaysan awoodin inay la midowdo aaladaha kale ee warbaahinta bulshada sida Facebook
Waxa ku xiga liiskayada abka kalluumaysiga bilaashka ah ee ugu fiican waa FishTrack. Appku waxa uu leeyahay astaamo xiiso gaar ah sida heerkulka dusha badda, xogta qubeyska, marxaladda dayaxa, iyo saadaasha cimilada.
Sidoo kale, App-kan kalluumaysi waxa uu awood kuu siin doonaa in aad kaydiso sawirada aad arki karto marka aad ku sugan tahay badda.
#7. Khariidada Google
Khariidadaha Google waa shaki la'aan mid ka mid ah codsiyada ugu fiican kalluumeysatada. Waa meel aad u fiican (oo la casriyeeyay) oo ah jardiinooyinka dadweynaha iyo meelaha kalluumeysiga la xiriira.
Sidoo kale waa barnaamij wanaagsan oo lagu helo meheradaha bakhaarka, dukaamada kalluumaysiga, iyo dukaamada alaabta isboortiga ee leh sahayda aad u baahan tahay. Waa inaad kaligaa ogaataa meelaha kuu dhow ama kuwa qarsoon.
Khariidadaha Google, dhanka kale, waa halbeegga dahabka ee wax kasta oo kale oo aad u qurux badan. Waxaa sii dheer, waa aamin, waxayna u badan tahay inay horay ugu jirtay taleefankaaga Android.
Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada kalluumeysiga bilaashka ah ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay kalluumeysiga biyaha cusbada. Goobtani waxa ay siisaa isticmaaleyaasheeda macluumaadka la xidhiidha ilaha qani ah.
Si kastaba ha noqotee, Pro Angler wuxuu leeyahay aalad marin wanaagsan, oo ay kujirto xawaaraha maraakiibta iyo howlaha jiheeyaha. Sidoo kale, waxay bixisaa macluumaad ku saabsan kalluunka ku dhuumanaya biyaha deegaanka iyo baaritaannada u gaarka ah noocyada.
Dhibaatada ugu weyn ee barnaamijkan ayaa ah inaysan wax macluumaad ah ka siinayn kalluumeysiga biyaha macaan. Taas macnaheedu waa kalluumeysatada ku raaxeysta kalluumeysiga biyaha macaan ma heli doonaan waxtar.
#9. Barta Kalluumaysiga
Goobaha Kalluumeysiga (Android, iOS) waa sanduuqa aaladaha dabacsan oo leh macluumaad faa'iido u leh kalluumeysatada. Waxaad kaydin kartaa meelaha aad ugu jeceshahay kalluumaysiga, khadadka trotlines, iyo jidadka jiid jiidka, oo aad isticmaasho Khariidadaha Google-ka iyo muuqaalada jaantuska qad la'aanta si ay kaaga caawiyaan inaad mar kale hesho.
Waxa kale oo aad kaydin kartaa diiwaanka qabashada, oo lagu buuxiyo sawirrada qabashada, wax kasta oo aad ku qabato safarkaaga.
Barnaamijku wuxuu kaloo bixiyaa saadaasha dhaqdhaqaaqa kalluunka, hirarka, cimilada, iyo kalandarka isolunar.
Iibsashada gudaha-app waxay kuu oggolaaneysaa inaad sare ugu qaaddo noocyada asaasiga ah iyo kuwa horumarsan, kuwaas oo tirtira barnaamijyada, ku dara jaantusyada badda ee khadka tooska ah ee Mareykanka, waxay kuu oggolaanayaan inaad ku darto tiro aan xad lahayn oo goobo kalluumeysi ah, oo aad bixiso xog saadaalin oo horumarsan.
#10. Xeerarka Kalluunka
Xeerarka Kalluunka (Android, iOS) waa barnaamij wehel waxtar u leh kalluumeysatada biyaha cusbada leh, oo ururinaya dhammaan sharciyada kalluumeysiga iyo xayiraadaha noocyada kala duwan iyo biyaha federaalka laga bilaabo Maine ilaa Texas hal meel.
Barnaamijku wuxuu iftiiminayaa xeerarka khuseeya iyadoo la adeegsanayo GPS -kaaga iyo jadwalka; waxaad sidoo kale gacanta ku gelin kartaa isku -duwayaashaada si aad u hesho wax kasta oo aad u baahan tahay.
#11. Knots Kalluumaysiga Lite
Kalluumeysiga Knots Lite, oo ah barnaamij bilaash ah oo siiya isticmaaleyaasha tilmaamo sawir oo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo xiro guntimaha kalluumeysiga ee kala duwan, ayaa sidoo kale loo heli karaa adeegsadayaasha Android.
Xirmooyinku waxay daboolayaan wax kasta oo ka imanaya duqsiga, jillaabyada, iswiidhishka, iyo sed kale, oo leh sharraxaad kooban oo ku saabsan adeegsiga iyo sidoo kale tusaha tusaalaha ah ee lagu xirayo.
Waxay si gaar ah ugu muuqataa kiniin, oo leh laba-boodh interface ah oo muujinaya liistada dhammaan guntimaha iyo sidoo kale sida loo-tilmaamo dhinac-dhinac. Iibsiga gudaha-app wuxuu tirtiraa xayeysiisyada.
Mid kasta oo ka mid ah codsiyadan kalluumeysiga bilaashka ah ee ugu fiican, waxaad ku hubin kartaa inaad leedahay waayo-aragnimo kalluumeysi oo madadaalo leh.
10 Barnaamijyada Goobta Baabuurka ee ugu Fiican 2022 -ka
Maxaa La Helaa Qof Wax Walba Leh | 20 Jawaabood ee ugu Fiican
10-ka sheeko ee dambiyada ugu wanagsan abid
Raadinta talooyinka? Ma tahay qof jecel sheekooyinka dembiyada? Hagaag, haddii aad kaliya isku dayayso inaad laaddo bilawga…
Barashada sida loo abuuro taajir meel eber ah waxay u ekaan kartaa mid aan la gaari karin, gaar ahaan haddii aad had iyo jeer u malaysay in shakhsiyaadka hodanka ah…
10 Qalabka Maareeyaha Mashruuca Google ee ugu Fiican Sanadka 2022
Fulinta mashruuc wanaagsan oo ah maamulaha mashruuca ma fududa. Tani waa sababta oo ah waxaad noqon doontaa…
Sida Loo Helo Xirmada $ 100 Xidhmada Xubinnimada | Eeg Dhammaan Baakadaha
Tababarka jireed waxa uu wanaajiya socodka dhiigga iyo fayoobida guud. Si kastaba ha noqotee, dad badan ayaa ku guuldareysta inay ku sii jiraan…
Ahaanshaha lacag la'aan waa wax soo saar caadooyin ula kac ah oo wax-soo-saar leh oo yoolka ku wajahan. Waxaa jira dhowr khuraafaad…